Ividiyo: Izinto ezintsha zenziwa ngokuSombulula iingxaki | Martech Zone
Umboniso bhanya-bhanya uphunyezwe ngokusombulula iingxaki
NgoMgqibelo, ngo-Epreli 16, 2011 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
NgoLwesihlanu, ndinikwe ithuba elimangalisayo lokuthatha inxaxheba kwiNgqungquthela yeNkqantosi yokuQamba izinto ezintsha. Phantsi kobunkokheli bukaMongameli uFrank Dale, ngombono ovela kuBlake Matheny, kunye nenkxaso yomsunguli uChris Baggott kunye noThengiso VP Scott Blezcinski, inkampani yathatha "ixesha lokuphuma" ekusebenzeni kwaye, endaweni yoko yanikela usuku kwinto entsha.
UChris waqala eli nyathelo ngebali elimangalisayo lokuba wasilela njani kwishishini elinye, kodwa emva kokuchonga ingxaki, wakha enye inkampani emangalisayo- NgqoThagethi.
Isitshixo sebali lakhe kukuba into entsha ayisiyiyo eyokudalwa kwento entsonkothileyo okanye epholileyo… Imalunga nokuchonga ingxaki kunye nokusebenza nzima ukufumana isisombululo. Ngosuku, amaqela ama-3 kwiCompendium achonge iingxaki ezi-3 ezahlukileyo abathengi babo:
Ukudala umxholo lula.
Ukuphucula umgangatho womxholo.
Ukuphucula amaxabiso okuguqula iibhlog zeefowuni eziza kuthathwa.
Amaqela aqhakamshelane nabathengi abaphambili, bacela uncedo lwabo, baqiqa ngezimvo, kwaye bade baqikelela nefuthe kwishishini. Andikwazi ukwabelana ngezisombululo-kuphela kokuba nganye iya kuba ngumtshintshi omkhulu womdlalo kwishishini labo. Konke ngosuku olunye!
Ngaba inkampani yakho ikhuthaza ngenkuthalo ukuvelisa izinto ezinje? Ukuba ufumanisa ukuba usuku nosuku ukugaya kweshishini lakho kutsala imveliso kunye nokuziphatha kweqela lakho-oku kunokuba sisisombululo esifanelekileyo sokuvuselela ishishini lakho, abasebenzi bakho, kunye nokusombulula iingxaki zokwenyani kwindawo yentengiso. Alithandabuzeki elokuba ndiza kuyifaka le nto kwinkampani yethu!
Ukubhengezwa: Ndingumnini zabelo kwiCompendium, qhubeka nokunceda abathengi babo, kwaye uBlake usebenze kwiiprojekthi ezimangalisayo zokukhuthala kunye Highbridge.
tags: blake mathenyuchris baggottisihlanganisiingqungquthela entsha
Lonke ishishini lelaseKhaya